WidhWidh Online » News » Sir Alex Ferguson: Alan Pardew Isaga Ayaa Garsoore Kala Tuuray Markaas Ayuu Wax Iga Sheegayaa
8:59 am » War Deg Deg Ah” Gaadhi Kudhacay Duleedka magaalada laascaanood iyo gabadh kudhimatay :Daawo Sawiro: 8:44 am » Xukuumada Syria oo weeraro adag ku qaaday magaalada Aleppo iyo mucaaradka oo laga qabsaday qeyb katirsan magaalada 8:21 am » Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Oo Digniin U diray Maleeshiyaadka SNM Ee Kusugan Laascaanood 8:10 am » Daawo Muqaal:Laga soo Duubay Meelaha ugu Halista Badan Caalamka. “Digniin Waa Cabsi” 20/06/2013 8:04 am » Daawo Muqaalka : Sida Loo Soodhaweyay M/weynaha maamulka khaatumo iyo waftidii uu hogaaminayay ee gaadhay dalka kenya 7:59 am » Madaxweynaha Mareykanka Brack Obama oo ka hadlay qaraxyadii iyo dagaalkii UNDP Shabaab ay ka geysteen 7:48 am » Dowladda Uk oo sheegtay inay baareyso warar sheegaya in muwaadiniin udhashay dalkeeda ay ku geeriyoodeen weerarkii UNDP 7:03 am » War Naxdin Leh:Weerarkii Xarunta UNDP oo laga abaabulay Madaxtoyada Somaliland 6:54 am » Breaking News Shil Baabuur oo Ka Dhacay Duleedka Magaalada Lascanood iyo Dhimasho, Dhaawac (Daawo Sawirada) 4:07 am » Brazil Oo Deyntii Wembley Iska Soo Guday Waxa Ayna Maxico Ka Tuureen Tartanka Qaaradaha Sir Alex Ferguson: Alan Pardew Isaga Ayaa Garsoore Kala Tuuray Markaas Ayuu Wax Iga Sheegayaa Published on Dec 28 2012 // CAYAARAHA Share
Tababaraha kooxda Manchester United ayaa weerar ku qaaday Newcastle iyo tababaraheeda Alan Pardew ka dib kulankii ay 4-3 kaga badiyeen ee ka dhacay Old Trafford.
Sir Alex Ferguson ayaa ka badbaaday in lagu ciqaabo murankii uu la galay garsoore Mike Dean iyo caawiyayaashiisa ka dib markii uu ogolaaday goolkii labaad ee Newcastle oo uu iska dhaliyay Jonny Evans inkastoo markii hore offside loo diiday.
Tababaraha Newcastle ayaana ku dhaleeceeyay garsoore Mike Dean inuusan taribuunka saarin Ferguson kulankaas madaama uu muran iyo qeylo sameeyay, isagoo sheegay in uu ka xumaaday inuusan wax talaabo ah qaadin Dean oo xitaa aan warbixintiisa ciyaarta ku xusin dhacdadaas.
Si kastaba 70 jirkaan ayaa haatan dib isaga weeraray dhigiisa Newcastle, isagoo sheegay in Alan Pardew uu yahay ninka ugu xun ee garsoore wax u geysta isagoo tusaale u soo qaatay kulankii Tottenham iyo Newcastle markaasoo uu Pardew kala tuuray calanwade.
Sir Alex ayaa u sheegay suxufiyiinta maanta: “Pardew waxa uu kala tuuray garsoore ka dibna uu kaftan ka dhigay, ka dib waxa uu leeyahay damiirka uu aniga igu dhaleeceeyo. Waa wax aan la rumeysan karin.
“Waa ninka ugu xun ee garsoorayaasha ku dhegdhega. Shaqaalihiisa oo dhan ayaa sidaasi sameeya ciyaar kasta. Kulankii arbacada sidaas ayuu sameeynayay ciyaarta oo dhan.”
Tababaraha Red Devils ayaa markaasi ka dib ka hadlay sida kooxdiisa ay u tahay koox weyn islamarkaana Newcastle ay u tahay koox yar oo waqooyi bari England ka dhisan.
“Waa nasiibdarro laakiin waxaan ahay tababaraha kooxda ugu caansan adduunka, ma ahi tababare Newcastle oo ah koox yar oo ka dhisan waqooyi bari.” ayuu hadalkiisa raaciyay.
“Waxaan ahaa mid mudaaharaadayay, mar walbana sidaas ayaan ahay. Qof walba ayaa og. Waxaan ahay nin qiiro leh. Laakiin ma aheyn mid aflagaado iyo xumaan ku kaca, kaliya waan ku qeylinayay Mike.”